Luuqada hooyadu waa furaha barashada luuqadaha kale. - NorSom News
Luuqada hooyadu waa furaha barashada luuqadaha kale.
Abdullah O. Mahmud vet det er viktig med best mulig kjennskap til sitt eget språk før man kan lære et nytt.
Marar badan oo cilmi baaris lagu sameeyay saameynta luuqada hooyo ay leedahay marka uu qofku baranayo luuqado kale, ayaa lagu ogaaday in luuqada afka hooyo ay tahay furaha ama isha barashada luuqadaha kale. Qofka hadii uu aqoon fiican u leeyahay luuqadiisa, waxay wax badan u sahlaysaa inuu barto luuqad cusub oo kale. Xarunta dadka soo galootiga ah ee magaalada Florø ayaa sanadkii lasoo dhaafay furtay xarun ay dadka aan horey wax usoo baran, ay jaanis dib ugu helaan inay luuqadooda afka hooyo bartaan.
Dadka xaruntaas sida iskaa wax u qabsada(frivillig) ah uga shaqeeyo waxaa kamid ah Abdullahi Osman Mahmud oo mudo 13 sano ah macalin ka ahaa Somaliya, isaga labo sano oo kalena ahaa maamule iskuul. Abdullahi oo sidoo kale lasoo shaqeeyay hay-ada Care qaybteeda Somaliya ayaa sanadkii 2010 Norwey, isaga oo bil kadibna helay sharciga magangalyada wadanka. Waxa uuna hada caruurta baraa luuqada afka hooyo.
Abdullahi ayaa sheegay in inta uusan qofku baran luuqada Norwiijiga ay muhiim tahay inuu qofku yaqaano luuqadiisa hooyo, inaad luuqad cusub barato adoon aqoon hore aan laheyna ma aha wax fudud. Sidoo kale isbuucii labo jeer ayuu Abdullahi caruur gaarayso 15 soomaali ah uu u dhigaa casharo. Isaga oo ka caawiyo maadooyinka Norsk, Engelsk iyo xisaabta. Hadii ay ciyaalku fahmaan ereyada norwiijiga ee xisaabta, waxay fahmeen jawaabta kala barkeed. Sidaas darteed ayuu abdullahi sheegay inuu caruurta ka caawiyo inay fahmaan ereyda xisaabta ah ee afka norwiijiga.
Maamulaha xarunta Siri Jansen ayaa waalidiinta ajaaniibta ah ku boorisay inay caruurta afkooda hooyo kula hadlaan marka ay guriga joogaan. Hadii uu ilmaha iyo waalidku midba luuqad gooni ah ku hadlo, waxay hadhow keeni kartaa is fahamwaa xaga luuqada ah oo dhexmara caruurta iyo waalidiinta. Sidoo kale ilmaha waxay luuqadaha hooyadu siinaysaa awood iyo faham dheeri ah oo ka caawin karta inuu barto luuqado kale oo badan. Waxay intaas ku dartay in ilmihii yaqaano laba luuqadood ama ka badan uu caruurta kale uu wax dheeryahay.
Previous articleBoolisku waa mahadsanyihiin, balse wali ma qanacsani ilaa dadka kale la igala mid dhigo
Next articleSoomaaligii ugu horeeyay oo darawal buss ka noqday magaalada Hamarfest